Eto Madagasikara, mandray andraikitra ireo tanora mpandraharaha mba hiadiana amin'ny coronavirus | UNICEF Madagasikara
Eto Madagasikara, mandray andraikitra ireo tanora mpandraharaha mba hiadiana amin'ny coronavirus
Marobe ireo fandraisan’andraikitry ny tanora eto Madagasikara manoloana ny coronavirus. Na eo aza ireo zava-tsarotra tsy tambo isaina miantraika amin’ireo orinasa madinika noho ny valanaretina COVID-19, toy ny fahazoana akora fototra, ny famerana ny fitaterana ary ny fanafoanana/fanemorana tetik'asa sy fitadiavam-piaraha-miasa, dia tsy mihemotra mihitsy ireo tanora mpandraharaha ireo. Miezaka miatrika ny toe-zava-misy izy ireo ka mamorona hetsika fandraisan’andraikitra entina mamaly ny filàna mifandraika amin’izany toe-javatra izany.
Tanjona Raveloson dia nieritreritra zavatra lehibe. Voalohany aloha dia namorona aro-maso iarovana amin’ny piti-drora vita pirinty 3D izy, ary avy eo dia nanamboatra milina mampiaina voatrolombelona VNI izay vonona ny 29 Mey. « Ny tanjona voalohany amin’izao ezaka ataoko izao dia mba hanampiana ireo mpisehatra amin’ny fitsaboana. Afaka namarotra ireo aro-maso ireo ho an’ny sarambabem-bahoaka sy ireo mpitsabo avy amin’ny sehatra tsy miankina aho ary nahazo fihenam-bidy goavana tokoa izy ireo tamin’izany. Ny tombom-barotra azo dia hividianana akora fototra mba hahafahana mizara izany maimaimpoana indray amin'ireo mpiatrika ady eny amin’ny lohalaharana. Raha mikasika ny milina mampiaina voatrolombelona dia ireo namana avy ao amin’ny Vokovoko Mena Malagasy no nanolotra fanamby tamiko, izay voatanterako soa aman-tsara, » hoy ny fanazavan'ity tanora tia karokaroka ity.
Hanta Tiana Rajaonarisoa, lehibena orinasa maitso, dia nahita hevitra hafa hamenoana ny tsy fahampian'ny gel hydroalcoolique eto an-drenivohitra amin'ny alàlan'ny famoahana « ny gel hydroalcoolique ho an'ny rehetra » izay manana endrika famarana ho an’ny isam-batan’olona. Gel hydroalcoolique mamono otrikaretina sy bakteria no fiantso azy amin’ny sarany ambany, araka ny torohevitra izay naroson’ny OMS. Raha ny filazan’io fikambanana io dia tsy ny Malagasy rehetra no manana fitaovam-piadiana fototra hiarovana ny tenany, rano ary savony. « Ny fanasana tanana tsy tapaka izay iray amin'ireo fihetsika sakana voalohany hiadiana amin'ny fifindran’ny aretina dia tsy afaka sitrahan’ny Malagasy an-tapitrisany maro, satria maro ny olona tsy mahazo rano ary tsy mahatsapa ny maha-zava-dehibe io fihetsika tsotra io mba hiarovany ny tenany. Izay no nahatonga ny fitsirian’ny hevitra mikasika ny fanapariahana ny gel hydroalcoolique sy ny fanentanana olona maro be araka izay tratra momba ny fanasana tanana matetika, » hoy ny fanazavany.
Mikasika an'i Marie Christina Kolo, mpiaro ny zon’ny vehivavy sy ny tontolo iainana sady mpandraharaha ara-tsosialy dia namorona savony ekolojika natao ho an'ny olona marefo eto Madagasikara izy. Nandritra ireny fotoan-tsarotra mifandraika tamin’ny COVID-19 ireny no nanatanterahany izany tamin’ny alalàn’ny rafitra firaisankina. ONG sy fikambanana am-polony maro no nanatevin-daharana an'ity hetsika ity.
Eto Madagasikara, ny fahazoana savony sy rano dia zava-dehibe manan-danja hiatrehana ny COVID-19. Matoky tena hatrany ireo tanora mpandraharaha eto amintsika ireo. « Ity krizy ity dia tokony ho fotoana iray hieritreretana ny “tontolo ho amin’ny ho avy”. Fotoana izao handinihana indray ny toekarentsika sy ny fomba fanjifana amin'izao fotoanan'ny krizy manerantany izao. Resy lahatra aho fa ny tanora dia manana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena vaovao izay tsy maintsy atsangana ary mendrika hampiroboroboina kokoa. Tsy inona izany fa toekarena maharitra izay mifantoka amin'ny asa maitso/manga sy ny toekarena maneho firaisan-kina », hoy i Christina, satria izy koa mantsy dia mpikatroka mafana fo momba ny toetrandro.
Ho an'i Hanta Tiana, « ny maha-mpandraharaha tanora dia midika hoe mitady vahaolana vaovao hanatsarana ny fiaraha-monina misy antsika ary hampandroso ny firenentsika ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa. Midika ihany koa izany hoe mamorona ny fanovana tiana hitranga eto amin'izao tontolo izao, » hoy ny fanazavan'ity mpanaraka ny filozofian'i Gandhi ity izay sahy manonofy zavatra goavana tokoa. Ary farany, « Ho an'ny tanora, makà ohatra, satria araka ny nambaran’ny namana iray, dia tena misy ny karma. Sady tsy manan-karena aho no tsy injeniera, fa kosa nanana finiavana sy toe-tsaina tia tanindrazana fotsiny. Na kely aza ny ananana dia afaka manova an'izao tontolo izao isika, ary amin'izao fotoana izao, afaka mamonjy aina ary miaro ireo mpitsabo isika. Mila tanora tsara fo, feno hetaheta sy tia famoronana ny firenentsika, » hoy i Tanjona Raveloson teo am-pamaranana.